Cotton & Canvas Bhegi
Kufambira Mberi Mubasa
Mune ma1980s, nekudzika kweshanduko uye mutemo wekuvhura, mari yevanhu yakawedzera uye mararamiro avo akavandudzwa, uye muchina wekusona wakava chimwe chezvinhu zvitatu zvakakosha mumhuri. Mumwe mukadzi anonzi Chunli, anova ambuya vangu, ari kunyatsogadzira bhegi pamushini wake wekusona, nekuti ndipo panotangira nyaya yake yekurongedza.
Nemabhegi anonyanya kushandiswa, ambuya vangu (Chunli) vakatanga zvakare kuunganidza vamwe vakadzi vezera rake kuita mabhegi padanho rakakura. Iwo mabhegi avakagadzira aive akagadzirwa neshinda yakakosha yekucheka zvekuti mabhegi acho aive akanaka uye akasimba. "Yusheng Textile Team," sekudana kwavakaita vari vega, raive boka raizivikanwa mudunhu iri, riine nhengo gumi neshanu chete panguva iyoyo, asi hupenyu hwakanga hwakaoma.
Sezvo chikero chakawedzera zvishoma nezvishoma, ambuya vangu vakapa iyi indasitiri kune manejimendi yababa vangu (Guowei), vachivimba kuti vaizogona kutungamira indasitiri yavo yekutakura zvinhu uye kuti vanhu vazhinji vazive mabhegi avo akanaka. Zvishoma nezvishoma, vanhu vakawedzera kubva kuNorth America neEurope vakapinda mukutengeserana muZhejiang. Baba vangu (Guo Wei) vakatanga kuyedza kutengesa navo. Kubatana hakuna kumira zvakanaka pakutanga nekuda kwedziviriro yemutauro, asi baba vangu (Guo Wei) vaiziva kuti izvi zvese zvainetsa uye mukana.
Kuvandudzwa kwehupfumi hwenyika kuri kuwedzera ruzivo uye kuomarara, uye iro boka diki rakawedzera kubva pavanhu gumi nevashanu kusvika mazana maviri. Baba vangu (Guo Wei) vaitarisira kuti fekitori yake diki inogona kuve nehurongwa hwakazara uye kuwana purofiti yakawanda. Mugore rino, baba vangu vakavamba kambani inonzi Yutai Bags.
China yakapinda munguva yeInternet muna1994, uye vanhu vakatanga kushandisa makomputa, nhare mbozha uye zvimwe zvekukurukurirana. Kunyangwe kuburitswa kwekambani kwedzimba kwasvika mamirioni makumi matatu emadhora ekuAmerica panguva ino, baba vake (Guo Wei) vanoziva kuti iyo Internet ichaunza mikana mikuru yebhizinesi kuvanhu vachifunga ruzivo rwake mukubatana nevatengi vekunze. Naizvozvo, anonyorera kunyoresa imwe diki e-commerce kambani yake - Shengyuan Packaging pane B2B webhusaiti.
Subsidiary, simuka kumucheto kurongedza co., LTD., Chinhu chikuru chinogadzirwa kunze kwenyika, baba (nzira) kune vatengi vekunze kune yakadzokororwa mapepa bhegi, uye zvakare zvishoma nezvishoma zvakare kuendesa inoenderana michina yebasa rekunze, uye inoda mushandi wega wega mukambani anoda kugona mutauro wekunze, nzwisisa tsika nemagariro, kudzidzisa vashandi vehunyanzvi uye timu yeR & d, ine nhevedzano yebasa rakakwana zvishoma nezvishoma.
Vasingazive, huwandu hwekushandira pamwe kwekambani yedu hwasvika pamazana evanhu, zvinoratidzawo baba kubva kudivi (nzira) yekutungamira boka vaive nevanhu gumi nevashanu chete vakananga kune ramangwana riri nani, vazhinji havana kuzadzisa tarisiro yambuya vangu. (chun-li), kana kunyangwe nyaradzo yehunyanzvi hwekusona kugadzira mabhegi kunze kwemukova, inogona kurega vanhu vazhinji kuti vashandise izvi nambuya vakatsaurira mabhegi avo.
Adress:Wenzhou Mwenje indasitiri yekugadzira nzvimbo